Ukhenketho 2021 Oyoun | Inkcubeko yokucinga kwakhona
IZIGQIBELELO * LAB
I-Co-curators: Golnar Tabibzadeh + Ava Houshmand
Sinokukugcina njani ukuhamba kobugcisa ukuba asikwazi ukujongana ngokwasemzimbeni?
Sizigcina njani iingqondo zethu kunye nokuzimisela kwethu kulenkqubo intsha yokuzazisa?
Sifumana njani (kwakhona) ukufikelela kuluntu lobugcisa kwaye sinokusebenzisana njani njengamagcisa?
Le ibiyimbuzo embalwa kwemibuzo emininzi ebesizibuze yona ekuqaleni kweprojekthi yethu ngokudibeneyo.
Uninzi lwethu, olwajoyina i-Oyoun Curators * Lab ekuqaleni kowama-2020, sazithembisa ngesidingo esasilindelwe kudala: indawo yokutshintshiselana ngokuqhubekayo kunye nokuvavanywa kwamanye amagcisa e-BIPoC elubhacweni.
Nangona amalungu e-Curator * Lab asebenzise iifomathi kunye nexesha elimxinwa lewindows ezivunyelwe zizithintelo zikaCovid ukubonisa umbono wabo, uCorona wayitshabalalisa imeko yenkcubeko kangangokuba uninzi lwenjongo yokuqala yahlala ilindile. dlula kwezi nyanga zininzi zokudideka kunye nokungaqiniseki. Olu chungechunge lweprojekthi yotyelelo ngoku lilinge lokuvuselela le ndawo, nangona phantsi kweemeko ezahlukileyo nakwinqanaba elahlukileyo.
Ngexesha apho inkcubeko, intlalo kunye nomsebenzi wokusebenzisana usengozini enkulu, mhlawumbi nokuba isemngciphekweni ngokupheleleyo, abanye bethu kwi-Oyoun's Curators * Lab bagqiba kwelokuba bahlale phantsi bacinge kunye. Sixoxe ngokuphandle ngamabhongo ethu obugcisa, ebesizabalazela ukuwagcina, kunye nendlela esinokujongana ngayo neengxaki ezikhoyo.
Njengengxenye yeli qonga, simeme amagcisa ukuba enze imisebenzi yamaqela kunye, ukuqala kwingcinga enesibindi yokuba kukho iindawo eziqhelekileyo, ezigqagqanayo zomdla ezinokuthatha ifomu entsha ukuba zenziwa ngokudibeneyo hayi ngabantu .
Iziphumo zinemisebenzi emihlanu enomdla, nganye eyahlukileyo ngolwimi lwayo kunye nefomathi; nganye inesiginitsha yomntu ngamnye obandakanyekayo kwaye isenza ifom entsha evela kule ntsebenziswano.
-Golnar Tabibzadeh, umlungelelanisi